Waa maxay talada midowga musharraxiinta kaddib go’aankii xukuumadda ee shalay? – Kalfadhi
Midowga musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo xalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Mogadishu ayaa ka hor yimid go’aankii Dowldda Federaalka ee shalay, kaas oo ahaa in doorashadda la gelayo si aysan wakhti kale u lumin.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in taladda midowga musharraxiinta ay tahay in dhammaan dadka ay quseyso arrimaha doorashooyinka oo ay ku jiraan musharraxiinta ay isugu yimadaan fagaare loo dhanyahay.
“Midowga musharraxiinta taladooda waxaa ay tahay in xalka loo noqdo, caalamka dalka taageerana ha yimaado, arrimaha doorashooyinka halaga hadlo horayna haloo socdo. Qaddiyada doorshada ee maanta taagan waa hannaan u baahan kalsooni iyo wadar ogol, waxayna ku haboontahay in shir la isugu yimaado oo lagu soo bandhigo”
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo guddoomiyaha xisbiga Dan Qaran oo ka wadda-hadlay xasiloonida doorashada